အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ - (က ၁း၁)
. အရာရာတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ဖြင့်အစပြုသည်။
. သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ဖြင့် အစပြုသည်.
. သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြင့်အစပြုသည် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ စာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့်။
“ဘုရားသခင်သည် ဘာနှင့်တူသနည်း” “ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မည်နည်း” ဒီမေခွန်းများသည် လူအများမေးနိုင်သော မေးခွန်းများဖြစ်သည်။ အဖြေမှန်ရရှိရန်ထက်ဘယ်အရာ မှအရေး မကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအဖြေများသည်၊ ဤကမ္ဘ္ဘာပေါ်တွင် မည်ကဲ့သို့နေထိုင်ကြောင်းကိုအဆုံး အဖြတ်ပေးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအဖြေများသည်၊ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်သည့် အချိန်ကုန်လျှင် ဘယ်အရပ်တွင်သွား၍နေထိုင်ကြမည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ ဘုရားသခင် ၏ အဖြေကိုရှာဖွေကြစို့။
ဘုရားသခင်သည် ထာဝရဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်နေသည်။ကျမ်းစာက “ တောင်များကို မဘော်၊ မြေကြီးနှင့်လောကဓာတ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မမူမှီ၊ ကိုယ်တော်သည် ရှေးကမ္ဘာအဆက်ဆက်မှစ၍၊ နောက်ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။“ (ဆာလံ ၉၀း၂)
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားများသည် အိုရမည်။အားလုံးသေရမည်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်သည်မအို၊မသေပါ။
Read more: ဘုရားသခင်
The LORD's Word အမှတ်စဉ် (၁၀၇) ဇူလိုင်လ ၂၀၁၀
သခင့်စကား The LORD's Word ၀ိညာဉ်ရေးရာစာစောင် အမှတ်စဉ် (၁၀၇) ဇူလိုင်လ ၂၀၁၀ ထွက်လာပါပြီး၊ ၉နှစ်ခရီးတာခရီးစဉ်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ ဒီလ ထွက်စာစောင်မှာ
ကဗျာ။ တကယ်တော့ (မင်းအောင်သက်လွင်)။ ဖေဖေသို့ - ဒီလှိုင်း၊ သတိရစေပါသခင် - လမ်းမှန် - Blessing Rain, သခင်ကျေနပ်ရင် တော်ပါပြီ - ငွေကျောက်ဖြူ၊ အဓိကလိုအပ်ချက် - Samuel Soe Lwin, ဖိတ်ခေါ်ခြင်း - မလေး (ဂျူလိုင်)၊
ဆောင်းပါးများ၊ အလွန်အသုံးဝင်သော ထိုငွေကြောင့် - ဇိအုန်သတို့သမီး၊ ဘုရားကိုမယုံကြည်ခဲ့သောရှေ့နေ - Samuel Soe Lwin, နားထောင်ခြင်းသော့ - တောနှင်းပန်း၊
သက်သေခံချက်။ ချာလျာ (AS), ပထမဆုံးသောဧ၀ံဂေလိ (အဂုံးဖုန်း)၊ အသက်တာရှည်၍ပြည်တော်၌ကောင်းစားလိုလျှင် (မာရာနသာနီနီခိုင်)၊ ဖေဖေ့မေတ္တာရင်ငွေ့လေး - Penny (mizo), လောဘမျက်ရည် - candlelight 25, ဖခင်ပုံရိပ် - ခမအ(မန်း)၊
Read more: The LORD's Word အမှတ်စဉ် (၁၀၇) ဇူလိုင်လ ၂၀၁၀
သူတပါးချင်း ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ငြိမ်းစေတတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည်ဘုရား သခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရကြလတံ့။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့် နှောင့်ရှက်ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရသောသူ တို့သည်မင်္ဂလာ ရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။
Read more: မင်္ဂလာတရားတော် (၁)
Read more: ပြည်ပရောက် သင်းအုပ်ဆရာ (၅)
စိတ်နာခြင်း - မင်းထွန်းသက်လွင်
စင်ကာပူမှ ငိုရှိုက်ချီးမွမ်းသံ - မင်းဟင်္သာ
မြဲမြံခိုင်ခံ့သောကျောက်စူး - ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ (၄)
တော်ပါသေးရဲ့ .. ဘုရားမပေလို့ (ဆိုး)